Bogga ugu weyn Sida Looga Bilaabo Shaqadaada Online ahaan Qoraa Mawduuc Madaxbanaan ah 2021
Inaad noqoto qoraa xog-ogaal madax-bannaan waxay leedahay faa'iidooyin badan, sida xorriyadda doorashada culayskaaga shaqada, jadwalkaaga, iyo macaamiishaada.
Waxa kale oo faa'iido leh sida ganacsiyo badan ayaa raba inay internetka galaan una baahan cid soo saarta nuxurkooda. Dhab ahaantii, celceliska mushaharka aasaasiga ah ee sanadlaha ah ee qorayaasha nuxurka madaxa-bannaan waa $ 57,674.
Inkasta oo faa'iidooyinka laga helayo, dhisidda xirfad onlayn ah sida qoraaga nuxurka madaxa-bannaan wuxuu u baahan yahay diyaargarow badan, oo ay ku jiraan horumarinta ganacsiga iyo maareynta nidaamka lacag-bixinta.
Maqaalkani waxa uu ku dhex mari doonaa siddeeda tilaabo ee aad ka bilaabayso xirfad-qoris madax-banaan, laga bilaabo horumarinta xirfadaha qoraalka ilaa soo saarista qaybta koowaad.
1. Dhiso Xirfadahaaga Qoraal
Si aad u noqoto qoraa xirfad leh, haysashada xirfado qoraal oo adag waa waajib. Waxaa intaa dheer, abuurista nuxurku way ka duwan tahay qorista qoraallada aad ku samaysay dugsiga sare. Waa inaad fahamtaa aasaaska SEO oo ka dhig nuxurka mid qallafsan, wada hadal ah, oo ku habboon shakhsiyad gaar ah.
Qoraa madax-banaan ahaan, waxaad sidoo kale mas'uul ka tahay maareynta ganacsigaaga, oo ay ku jiraan qorista qandaraaska, qaansheegta, iyo abuurista nuqul qancin ah si aad u suuq-geynayso qoraalkaaga.
Koorasyada khadka tooska ah, sida Skillshare iyo Udemy, waxay ku caawinayaan horumarinta xirfadaha qorista. Diiwaangeli oo iibso koorasyada qoraalka nuxurkooda sida qorista ganacsiga, nuqul qorista, iyo tafatirka.
Haddii kale, ku biir koorsooyinka bilaashka ah ee ka socda mareegaha suuqgeynta dhijitaalka ah sida HubSpot iyo Surfer SEO. Waxay daboolaan mawduucyo kala duwan oo ku saabsan qoraalka nuxurka, laga bilaabo cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ilaa suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Ka sokow, tixgeli inaad akhrido nuxurka bloggers ama shirkadaha caanka ah. Barashada maqaallada blog-ka iyaga ayaa faa'iido leh maadaama aad ogaan doonto sida tayada sare leh ay u egtahay.
2. Baro waxa ay sameeyaan qorayaasha madaxa banaan
Kadib kobcinta xirfadahaaga qorista, hubi adeegyada qorayaasha madaxa-banaan si aad fikrad uga hesho waxaad bixin karto.
Caadiyan, adeegyada qoraaga madaxa-bannaan waxaa ka mid ah:
Qoraalada warbaahinta bulshada
Buug-gacmeedyada iyo nidaamyada hawlgalka caadiga ah (SOPs)
Qorayaasha madax-bannaan ee cusub waxay caadi ahaan isku dayaan meelo kala duwan si ay u ilaaliyaan ganacsiga qorista mid kobcaya oo ay u helaan shaqo qoraal ah oo madaxbannaan oo ay ku raaxaystaan. Si kastaba ha ahaatee, tixgeli inaad doorato hal adeeg oo gaar ah marka aad ku kalsoon tahay xirfadahaaga si aad naftaada uga dhigto khabiir goobta.
Haddii aad jeceshahay fikradda qorista waxyaabo kala duwan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad qeexdo meelo juqraafi ah ama mowduucyo. Tusaale ahaan, waxaad isu suuqgeynaysaa sidii qoraa wax ka qora New York ama qoraa maaliyadeed.
3. Samee Mareeg Qoraa Madaxbanaan
Websaydhku waa qalab aad u fiican oo lagu suuq gayn karo ganacsigaaga qoraal ee xorta ah. Waxay kordhin kartaa joogitaankaaga internetka oo waxay tusin kartaa shaqadaada macaamiisha mustaqbalka.
Si aad u dhisto degelkaaga, ku bilow iibsashada magac domain. Way fiicantahay in lagu daro magacaaga - kow, u dambeeya, ama iskudarkooda - si ay dadku u helaan goobta marka ay magacaaga ku qorayaan matoorada raadinta.
Kadib, dooro madal mareegaha, sida WordPress ama nidaam kasta oo kale oo lagu maamulo nuxurka, oo dooro mawduuc ka tarjumaya shakhsiyadaada.
Hadda, waa waqtigii lagu dari lahaa qaybaha ugu muhiimsan boggaaga qoraaga madaxa-bannaan:
bogga adeegyada. Sharax adeegyadaada iyo meelaha wax lagu gato ee gaarka ah. Tusaale ahaan, waxaad bixin kartaa ilaa saddex dib u eegis bilaash ah.
Ku saabsan bogga Is baro adiga oo ku dara magacaaga, goobtaada, iyo khibradaada xirfadeed. Sidoo kale, tixgeli inaad ku darto sawirkaaga xirfadlaha ah si aad ugu darto shakhsiyad.
Bogga xiriirka. Liis garee macluumaadkaaga xiriirka, sida ciwaanka iimaylka iyo muuqaalada warbaahinta bulshada.
Bogga faylalka Soo bandhig muunado qoraal ah Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto markhaatiyaal caddayn bulsho ahaan.
Blog Hab fiican oo aad ku tusi karto shakhsiyadaada oo aad kor ugu qaaddo aragtida maadaama aad ereyo muhiim ah ku dhejin karto blog-ka. Marka ay leedahay nuxur heer sare ah iyo ka-qaybgal sare, balooggu sidoo kale wuxuu noqon karaa muunad qoraal ah oo adag ama xitaa ilo kale oo dakhli.
4. Dhis Joogitaankaaga Online iyo Shabakadda
Mareegaha ka sokow, dhisidda joogitaan online ah iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada waa hab fiican oo lagu soo jiito macaamiisha qoraallada madax-bannaan. Samee a LinkedIn profile ama Facebook bogga si aad u wadaagto adeegyada iyo nuxurka qiimaha leh sida muuqaal ka mid ah boostadaadii ugu dambeysay ee blog.
Waxaa intaa dheer, tixgeli inaad la xiriirto qorayaasha madax-bannaan ee kale adiga oo la xiriira warbaahinta bulshada ama ku biirista bulshada qoraaga madaxbannaan. Waxay kaa caawinaysaa inaad aragtiyo iyo talooyin ka hesho warshadaha ama fursadaha blogging martida.
Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa xirfadlayaasha kale sida naqshadeeyayaasha ama horumarinta shabakada si aad u tixraacdo midba midka kale gigs.
5. Hel Ilaha Shaqada Qorista Madaxbanaan
Mararka qaarkood, haysashada muuqaal wanaagsan oo warbaahinta bulshada ah iyo degelka portfolio ayaa laga yaabaa inaanay ku filnayn in la helo shaqooyin qoraal ah oo madaxbannaan, gaar ahaan qorayaasha cusub. Xaaladdan oo kale, isu-diiwaangelinta boggaga internetka ee xorta ah waa xal aad u fiican si aad u degto macmiilkaaga koowaad.
Waa kuwan saddexda goobood ee ugu sarreeya:
Dhallinta - Waxay la socotaa nidaam dib u eegis hufan iyo ilaalin madax-bannaan, sida ka saarista dalabyada been abuurka ah.
Dadka Saacaddiiba - waxay awood kuu siineysaa inaad la xiriirto macaamiisha maxalliga ah taasoo kuu horseedi karta fursado mustaqbalka fog ah.
Contently - goobta xorta ah ee qoraa-keliya oo leh si sahlan loo dejiyo faylalka qoraalka khadka tooska ah.
Si kastaba ha ahaatee, goobahan freelancing waxay noqon karaan kuwo tartan leh. Sidaa darteed, tixgeli inaad ku darto mashruucyada yaryar bilowga si aad u dhisto dib u eegis togan oo kaa caawin doona inaad ku degto gigs weyn oo ka fiican.
6. Go'aanso Nidaamka Qiimayntaada
Horumarinta nidaamka qiimahaaga waa mid ka mid ah faa'iidooyinka noqoshada madax-bannaaniye. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku noqon kartaa jahawareer dadka cusub. Guud ahaan, waa inaad ka fiirsato labada dhibcood ee hoose ee nidaamka qiimahaaga.
Qiimaha Lacag-bixinta iyo Jadwalka
Marka hore, go'aanso haddii aad rabto inaad ku dalacdo macaamiisha erayo, saacado, bogag, ama mashruucyo. Caadiyan, heerka qoraha madax-bannaan ee cusub ee cadaalad ah waa $0.20 eray kasta ama $30 saacaddii. Dhanka kale, qiimayaasha mashruucu waxay ku xirnaan doonaan macluumaadka, sida dhibka mawduuca iyo nooca nuxurka.
Hal talo ayaa ah inaad ku kalsoonaato xirfadahaaga. Waxa ay noqon kartaa mid soo jiidasho leh in aad aqbasho mashaariicda lacag-bixin yar, laakiin tixgeli dadaalkaaga oo ku adkeyso heerkaaga gundhigga. Kor u qaad qiimahaaga marka aad noqoto qof khibrad badan oo aad hesho macaamiil cusub.
Sicirka bixinta ka sokow, waa inaad sidoo kale go'aansatid goorta aad rabto inaad hesho lacagta. Xulasho badbaado leh, dooro 50% xagga hore si aad uga fogaato macaamiisha aan mas'uuliyadda lahayn oo aad hesho inta soo hartay marka mashruucu dhammaado.
Qaar ka mid ah mareegaha xorta ah ayaa si toos ah u soo dira qaansheegta oo ay ku jiraan khidmadaha goobta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad adigu diyaarisa marka aad ka hesho macaamiil ka baxsan goobaha.
Canva iyo Spreadsheet bixiso qaab qaansheegad bilaash ah oo xirfad leh si loo habeeyo. Beddelkeeda, maalgashi qaansheegta software, sida Hubstaff iyo FreshBooks. Waxay wataan nambarada qaansheegadka tooska ah, xasuusiyayaal, iyo kharashyo daahsan.
7. Samee qoraalka
Hambalyo helitaanka macmiilkaaga koowaad. Hadda, waa waqtigii la soo saari lahaa waxyaabo tayo sare leh adoo fulinaya saddexda tallaabo ee muhiimka ah ee hoose.
Baro macmiilka bloggiisa jira iyo agabka shirkadda si aad u ogaato codkooda iyo qaabkooda. Haddii ay tahay nuxurka degelka, ka raadi ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha adiga oo isticmaalaya aaladaha sida Isbeddellada Google iyo JawaabTacsiye.
Haddii aad qorto qoraal dheer, ku billow inaad u qaybiso nuxurka dhawr ciwaan si aad maqaalka uga dhigto mid la akhriyi karo oo kaa caawiyo inaad hesho sawirka weyn. Qorayaasha madax-bannaan ee cusub waxay inta badan ka fikiraan qabyo-qoraalka koowaad, laakiin looma baahna in laga walwalo maadaama aad had iyo jeer dib u habeyn karto.
Xeerka suulka ayaa ah in la fahmo ujeedada maadaama ay kaa caawinayso inaad go'aamiso xagasha ugu fiican. Tusaale ahaan, nuqul ka mid ah boggaga soo degista ujeedadeedu tahay in la beddelo booqdayaasha, halka maqaaladu ay bixiyaan macluumaadka oo ay ka caawiyaan akhristayaasha inay xalliyaan dhibaatooyinkooda.
Kahor intaadan u gudbin macmiilka, wax ka beddel shaqadaada. Dib u eeg shuruudaha oo isticmaal qalabka qoraalka, sida:
Naxwaha. Qalabkan freemium AI wuxuu tilmaamayaa khaladaadka naxwaha, wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan doorbidyada qaabaysan, iyo hubinta been-abuurka.
Hemingway. Waxay dhalisaa akhriska nuxurka waxayna muujisaa qaab-dhismeedka jumlada adag.
8. Isku Habbee Shaqadaada
Inaad noqoto madax-banaani waxay la macno tahay inaad sidoo kale noqon doonto maamulaha mashruucaaga. Markaad hesho macaamiil badan, qaabayso socodka shaqadaada si aad u ogaato dhammaan hawlaha aad ka shaqaynayso oo aanad ka maqnaan wakhtiga kama dambaysta ah.
Qalabka maareynta mashruuca sida Trello iyo Asana waxay ku caawinayaan inaad la socoto shaqadaada. Way fududahay in la isticmaalo waxayna awood kuu siinayaan inaad ku darto isticmaaleyaal cusub haddii aad u baahan tahay inaad ku casuunto macaamiisha ogolaanshaha.
Halkaa waxaad ku haysaa - siddeedda tallaabo ee bilawga shaqo qorista madax-bannaan. Tallaabooyinka waxa laga yaabaa inay marka hore u muuqdaan kuwo culus, laakiin way fududaan doonaan oo waxay kuu horseedi doonaan shaqo madax-banaan oo mushahar sare leh ugu dambaynta.
Aynu dib u koobno ​​tillaabooyinka sida loo noqdo qoraa madax-bannaan:
Dhis xirfadahaaga qoraal.
Baro naftaada adeegyada qoraalka nuxurka.
Samee shabakad qoraa madax-bannaan.
Samee shabakadaada adiga oo abuuraya muuqaalada warbaahinta bulshada kuna biir bulshooyinka.
Isku qor boggaga qoraallada madax-bannaan
Go'aami nidaamka qiimahaaga.
Qor gabalkaaga ugu horreeya.
Habbee hawlahaaga addoo isticmaalaya software maaraynta mashruuca.
Waxaan kuu rajeyneynaa nasiibka ugu wanaagsan ee dhisida xirfadaada qoraal ee madaxa banaan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, xor ayaad u tahay inaad noogu dhaafto faallo.
Dib u eegisyada Caymiska Nolosha Aaminaada 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Haddii qof uu ii sheego in mid ka mid ah uu samayn karo nolol wanaagsan ciyaarista ciyaaraha fiidyaha, waan...
23 Goobaha Kuuban ee Ugu Fiican Si Lacag Loogu Kaydiyo Maalin kasta | 2021 Liiska
Halkee baan ku iibin karaa DVD -yadayga onlayn? 13 Meel Si Lacagtaada Loogu Soo Celiyo | 2022
Helitaanka halka lagu suuq geeyo DVD-yada had iyo jeer waxay ahayd caqabad weyn oo dadka badankiisu la kulmaan sababtoo ah DVD-yadu maaha…
Lacag ku Bixiya Si Toos ah: Youtube, Twitch, Facebook
Soo daawashada tooska ah waa warshado horumaray sanadihii lasoo dhaafay. Soo gudbinta tooska ah waa baahinta…